12/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Governemanta Ntsay Christian : Hitantana indray ny kolontsaina ny minisitra Johasy Eléonore
Tsy olom-baovao eo amin’ny toerana maha-minisitra. Efa niantsoroka ny minisiteran’ny Tanora sy ny ala voly tamin’ny governemanta Camille Vital (Mars 2011 – Novambra 2011) izy, ary minisitry ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny …Tohiny
Fetim-pirenena malagasy : Tsy mena mitahy amin’ny vita sinoa ny vita gasy
Tapa-bolana eo sisa dia higadona ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy, hankalazana ny nahazoan’ny Madagasikara ny fahaleovantena. Omen-danja amin’izany ihany koa anefa ny ankizy, satria anatin’ny fanamarihana ny fetin’ny ankizy ny volana jona. Karazana kilalao iray …Tohiny
Mpitari-tolona teny amin’ny 13 Mai : Tonga amin’ny tanjona niriany
Tsy nidilatra tamin’izay notakian’ireo mpitokona teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ny fomba firafitry ny governemanta vaovao izay nitsangana omaly. Saika tafiditra ao avokoa mantsy ireo nampiaka-peo teny amin’ny lampihazo nandritra ny nanaovana fitokonana. Voasolo tena …Tohiny
Kaomina Bekopaka : Fiara 4×4 nitondra mpizahatany notafihan’ny dahalo
Ankoatra ny fanafihana fiara 4×4 miisa telo tany amin’ny kaominina Beravina , dia nahafatesana mpamily iray ny faran’ny herinandro lasa teo, fiara tsy mataho-dalana miisa efatra hafa nitondra mpizahatany indray no norobain’ny dahalo tany amin’ny …Tohiny